Wax soosaarka ilaa ugu badnaan: Sidee si qoto dheer loogu adeegsadaa codsiga Maskaxda? | Laga soo bilaabo Linux
Kadib qoraalkeenii hore ee kusaabsanaa nooca ugu dambeeya ee xasilloon iyo qaababka suurtagalka ah ee rakibidda xiisaha iyo waxtarka leh ilo furan iyo iskutallaab codsi wac Maskaxda, kaas oo oggolaanaya hagaajinta wax soo saarka isticmaalaha dusha sare ee kumbuyuutarkooda, waxaan kusii wadaynaa casharkaan sida loo adeegsado.
Dhammaan si si fiican loogu sharaxo isticmaalkeeda iyo maamulkeeda qaar ka mid ah kuwa ugu fiican ama ugu wax ku ool ah plugins inaad diyaar u tahay inaad ku guuleysato yoolka ah kordhinta wax soo saarkeena kumbuyuutarkayaga, gaar ahaan markay rakibeen a Nidaam hawlgal oo bilaash ah oo furan, sida GNU / Linux.
Way fiicantahay in la ogaado taas Barnaamijka maskaxda, ma aha codsi aad u culus, taas oo ah, waxay isticmaashaa tiro aad u badan Kheyraadka CPU, RAM ama HDDSi kastaba ha noqotee, kuwa adeegsadayaasha ah ee had iyo jeer doonaya inay isticmaalaan kheyraadka kombiyuutarkooda ugu yaraan, way fiicantahay in la caddeeyo taas Maskaxda waxay ka dhigi kartaa inay cunaan qadar qaali ah oo iyaga ka mid ah, gaar ahaan marka la isticmaalo, maadaama nasashada, hubaal cunitaankeeda kheyraadku waa mid aad loo aqbali karo.
Sidaa darteed laguma talinayo in la isticmaalo haddii ay hubaal tahay kombuyuutar ilaha hooseeya ama aad rabto inaad ka faa'iideysato% kasta oo ka mid ah ilaha kombiyuutarka ee meelaha kale ama howlaha kale.
1 Wax soo saar ku saabsan GNU / Linux: Barashada isticmaalka Cerebro
1.1 Dejinta bilowga maskaxda
1.2 Kuwa kale
1.3 Siyaabaha rogista
1.4 Gawaarida kumbuyuutarka (HotKeys)
1.4.1 Furaha C
1.4.2 E furaha
1.4.3 M fure
1.4.5 Furaha P
1.4.6 Q key
1.4.7 Furaha R
1.4.8 Furaha S
1.4.9 Furaha T
1.4.11 Furaha V
1.4.12 Furayaasha 1 ilaa 9 iyo Furaha »*«
1.4.13 Furayaasha »+» iyo »-«
1.4.14 Furaha "Arrow up"
Wax soo saar ku saabsan GNU / Linux: Barashada isticmaalka Cerebro
Dejinta bilowga maskaxda
Qaab dhismeedka bilowga ah ee muhiimka ah ee Cerebro waa mid aasaasi ah. isaga daaqadda qaabeynta waxay ku egtahay xuduudaha soo socda:
Furaha Helitaanka Tooska ah (HotKey): Qeybtaan codsigu wuxuu kuu ogolaanayaa inaad qaabeyso isku darka furayaasha lagama maarmaanka u ah inaad dhaqaajiso arjiga iyadoon loo baahneyn jiir (jiir). Sida caadiga ah, isku dhafka furaha ayaa loo qaabeeyey «Ctrl+Space». Laakiin waxay u oggolaaneysaa in la beddelo haddii aan isku dhigno sanduuqa qoraalka oo aan riixno fureha «Ctrl» iyo annaga oo aan sii deynin, waxaan riixnaa fure labaad si aan u beddelno (u beddelno) fureha «Space».
Wadan (Wadan): Qeybtaan waxaan ku tilmaami karnaa Cerebro wadankeena hada, si hadhow, ay ugu adeegsato macluumaadkaas shaqsiyadeed ama ugu fiicnaato xogta si ay noo siiso. Tusaale ahaan, leh a plugin (plugins) de cimilada) na sii xog qaas ah oo toos ah.
Dulucda: Qeybtaan waxaa naloo ogol yahay inaan doorto Mawduuc gaar ah si aan u bedelno muuqaalka muuqaalka ee muuqaalka muuqaalka arjiga. Iyo dabcan, keen mawduuc «Dark», taas oo sida caadiga ah ay dad badani aad u qiimeeyaan.
Aqtiyaari kala duwan: Dhamaadka daaqadda qaabeynta, waxaa na tusay xulashooyin taxane ah oo la yiraahdo:
Fur furitaanka: In la amro arjiga si loo raro marka nidaamka hawlgalka uu bilaabmayo ee isticmaalaha uu ku galayo. Doorashadan waxaa karti u yeeshay markii hore.
Ku muuji bar-menu: Si aad ugu sheegto arjiga si aad u muujiso astaan ​​isku mid ah, qolka hawsha ee ka sarreeya aagga ogeysiiska ee loo yaqaan 'Desktop Environment'. Xulashadan waxaa karti u yeeshay markii hore.
Habka horumariyaha: Kani waa ikhtiyaar horumarsan oo ay adeegsadeen kuwa u heellan inay khaladka arjiga, sidaa darteed, ikhtiyaarkan laguma dhaqaajinaayo qaab ahaan, lagugumana talinayo inaad ka shaqeysid illaa aad adigu isticmaale sare u tahay
Ku nadiifi natiijooyinka maqaarkaIkhtiyaarigani wuxuu u sheegayaa arjiga inuu tirtiro raadintayada iyo hawlgallada asalka ah mar kasta oo dib loo bilaabo. Doorashadan waxaa karti u yeeshay markii hore.
U dir tirakoobyo aan la aqoon - waxay u baahan tahay dib u bilaabid: Ikhtiyaarkan waxaa loo heli karaa si loogu oggolaado dirista macluumaadka ku saabsan adeegsiga dalabka kuwa soo-saareyaasheeda ah inay adeegsadaan, si ay u horumariyaan. Ikhtiyaarkan laguma dhaqaajin asal ahaan.
U dir warbixinnada shilalka otomaatigga ah - waxay u baahan tahay dib u bilaabid: Ikhtiyaarkan waxaa loo heli karaa si loogu oggolaado dirista macluumaadka ku saabsan khaladaadka dalabka kuwa soo-saareyaasheeda ah si ay u adeegsadaan, si ay u horumariyaan. Xulashadan waxaa karti u yeeshay markii hore.
Intaa waxaa dheer, isticmaalka jiirka (jiirka) si uu ugu dhaqaaqo arjiga, wuxuu u oggolaanayaa isticmaalka kumbuyuutarka inuu ku dhex dhaqaaqo gudaha. Furayaasha loo diyaariyey tan waa kuwan soo socda:
Fallaaraha jihada dhinaca « <- -> » y « ctrl + j/k » waxaa loo isticmaalaa in lagu xusho sheyga xiga ama kan ka horreeyay.
Furayaasha « enter » iyo warqadda « o » waxaa loo isticmaalaa in lagu xusho shay.
Furayaasha « escape » ama falaarta bidix « <- » waxaa loo isticmaalaa in dib loogu celiyo xulashada liiska natiijooyinka ugu muhiimsan.
Gawaarida kumbuyuutarka (HotKeys)
Goynta Maskaxda (Eeg Qaabeynta)
Nooca maskaxda (Eeg nambarka nooca)
Qashinka qashinka ah (Faaruqi qashinka)
Maskaxda Ka Bax (Xidho arjiga)
Ka aamus (Dami mugga kumbuyuutarka)
WiFi Daar (Daar qalabka WiFi ee kombiyuutarka)
WiFi Dansan (Demi qalabka WiFi ee kombiyuutarka)
Maamul xirmooyinka (Maareynta Maskaxda Maskaxda)
Maskaxda Ka Bax (Ka bax codsiga adoo xiraya)
Reload (Dib u buuxi arjiga)
Hurdo (Sahlo shaqada hibernate kombiyuutarka)
Xidh (Sahlo shaqada xiritaanka kombiyuutarka)
Dareen la'aan (Daar mugga kumbuyuutarka)
Furayaasha 1 ilaa 9 iyo Furaha »*«
Nuurkii (Heerka dhalaalka shaashadda)
Furayaasha »+» iyo »-«
mugga (Heerka mugga kumbuyuutarka)
Furaha "Arrow up"
Amarkii ugu dambeeyay ayaa la fuliyay (Amarkii ugu dambeeyay ee la fuliyay)
Hadda, Maskaxda wuxuu leeyahay kuwan soo socda plugins la heli karo, oo aan gadaal ka hadli doono oo faahfaahsan si loo fududeeyo isticmaalkooda iyo fulintooda, iyadoo laga daneynayo wax soo saar dhammaan adeegsadayaasheeda, iyadoon loo eegin Nidaamka Howlgalka ee la adeegsaday.
Shakhsi ahaan, waxaan u maleynayaa inay ka fiicnaan laheyd Maskaxda waa inay ku fiicnaataa waxyaabaha soo socda si ka wanaagsan loo isticmaalo:
U oggolow cabirka daaqadda qaabeynta.
U ogolow barta baaridda sabaynaysa inay ku soo xidhato Desktop-ka.
Soo hel turjumaaddiisa dhowr luqadood, gaar ahaan Isbaanishka.
Noqo mid la jaan qaada noocyada casriga ah ee GNU / Linux Distributions.
Si joogto ah u cusbooneysii, diiradda ha saarin waxyaabaha waaweyn ee lagu daro.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Cerebro», kan labaad ee qoraaga iyo kan saddexaad ee Blog, wuxuu fududeeyaa isticmaalka iyo laqabsiga dalabka la sheegay ee adeegsadayaasha doonaya inay sare u qaadaan wax soo saarkooda kombiyuutarada, sidaas darteedna, waa mid aad u dan iyo utility, Dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Wax soosaarka ilaa ugu badnaan: Sidee si qoto dheer loogu adeegsadaa codsiga Maskaxda?
Codsiyada qaabkan waxaan doorbidayaa 'Albert'.
Waad ku mahadsantahay faalladaada iyo soo jeedintaada. Waxaan durbaba tijaabinayaa 'Albert' waxayna umuuqataa mid runtii fiican. Xaqiiqdii waxaan sameyn doonaa maqaal ku saabsan iyada dhowaan.
Waqtigan xaadirka ah, waxaan ku sameyn doonaa maqaalkii saddexaad iyo kii ugu dambeeyay ee ku saabsan Cerebro, gaar ahaan maaraynta qaar ka mid ah waxyaabo aad u faa'iido badan leh (plugins) oo ay tahay inay kordhiso wax soo saarkeeda.
Waxaan isticmaalay maskaxda muddo dheer ilaa ay ka bilawday inay dhibaatooyin i siiso, waana in dayactirkeeda / horumarinteedu u muuqato mid fadhiid ah; Lama cusbooneysiin tan iyo 2017. Nooca 3.1 wuu ii shaqeeyey laakiin 3.2 weligood ma sameyn. Dhinaca kale, Alber wuxuu umuuqdaa inuu kafiican yahay arintaas.
Ku jawaab Moltke
Waqtigaan la joogo, haddii aad rabto, waad ka akhrisan kartaa qodobka saddexaad iyo kii ugu dambeeyay ee ku saabsan Cerebro, gaar ahaan maareynta qaar ka mid ah faa iidooyin aad u faa'iido badan leh (plugins) oo ay tahay inay kordhiso wax soo saarkiisa: https://blog.desdelinux.net/complementos-cerebro-plugins-aumentar-productividad/
Liiska nidaamka lacag la'aanta ah ee nidaamka